Umkhiqizi kanye neFektri Engcono Kakhulu ye-EPE | Yilibao
Ukuvikela: I-EPE Puzzle Mat ithambile futhi ayishebi, izingane zingadlala futhi zikhase ngokuphepha kuyo.
Kuyindlela enhle yokuthuthukisa imikhiqizo yethu nezixazululo nokulungiswa. Umsebenzi wethu uhlala njalo ukusungula imikhiqizo yezobuciko nezixazululo kubathengi abanobuchwepheshe obuhle kakhulu bokuThengisa iMikhiqizo Amafolda Wokudlala Amanani Athengiswayo Inani Elishibhile elenziwe eChina Factory, Samukela ngokuphelele amakhasimende avela nxazonke zomhlaba ukunquma ubudlelwano benkampani obuvikelekile nobusizayo, ukuba nekusasa elikhazimulayo ngokuhlanganyela.
Ngokuqamba okuqhubekayo, sizokwethulela izinto ezibaluleke kakhulu nezinsizakalo, futhi siphinde senze umnikelo ekuthuthukiseni imboni yomata ekhaya nakwamanye amazwe. Bobabili abathengisi basekhaya nabangaphandle bamukelwa ngokuqinile ukuthi bahlanganyele nathi ukuze sikhule ndawonye.
Izinto ze-EPE ziyinto entsha enobungani bemvelo enokuqina okuphezulu namandla okumelana nokushaqeka.
Kuyinto nezimo, ukukhanya, futhi nokunwebeka. Ingamunca futhi isakaze umthelela wangaphandle ngokugoba ukuze ithole umphumela wokuthinta.
Nqoba ukushiyeka kwe-styrofoam ejwayelekile entekenteke, (uma sikhuluma kancane) ikhubazekile futhi ingatholakali kalula.
Ngasikhathi sinye, i-EPE inochungechunge lwezici zokusetshenziswa eziphakeme njengokulondolozwa kokushisa, ukumelana nomswakama, ukwahlukanisa ukushisa, ukwahlukanisa umsindo, ukulwa nokungqubuzana, ukulwa nokuguga, nokumelana nokugqwala.
Lawula indinganiso ngemininingwane, bonisa amandla ngekhwalithi ". Inhlangano yethu ilwele ukusungula ithimba labasebenzi elisebenza kahle futhi elizinzile futhi yahlola indlela yomyalo esezingeni eliphakeme ye-Cheap PriceList for China High Quality Lightweight Backpacking Foldable Air Mattress Inflating Sleeping Mat, Inqubo yethu enolwazi olukhethekile iqeda ukwehluleka kwengxenye futhi inikezela abathengi bethu ngokungathandeki kwekhwalithi ephezulu, esivumela ukuthi silawule izindleko, sihlele amandla futhi sigcine ukuhambisana nesikhathi sokulethwa.
Uhlu lwamanani ashibhile lwentengo ye-China Foam Play Mat, Ithimba lethu lobuchwepheshe lobunjiniyela ngokuvamile lizobe likulungele ukukusebenzela ukubonisana nempendulo. Siyakwazi futhi ukukunikeza ngamasampula amahhala ukuhlangabezana nezidingo zakho. Imizamo emihle kakhulu izokhiqizwa ukukunikeza insizakalo enhle kakhulu nokuthengiswayo. Uma ulangazelela ibhizinisi lethu nezinto, qiniseka ukuthi ukhuluma nathi ngokusithumela ama-imeyili noma usishayele ngokushesha. Ngomzamo wokwazi okuthengiswayo kwethu nenkampani eyengeziwe, ungahle ufike embonini yethu ukuyibuka. Ngokuvamile sizokwamukela izivakashi ezivela emhlabeni wonke kubhizinisi lethu ukudala ubudlelwane bebhizinisi nathi.
Langaphambilini Iphephadonga le-3D
Olandelayo: TPU asongwe Mat